Niman ka tirsan Al-shabaab iyo walxaha qarxa oo lagu soo bandhigay degmada Doolow (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Niman ka tirsan Al-shabaab iyo walxaha qarxa oo lagu soo bandhigay degmada Doolow (SAWIRO)
Maamulka Jubbaland ayaa maanta degmada Doolow ee gobolka Gedo kusoo bandhigay 4 nin oo ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin Al-shabaab, kuwaas oo ku howlanaa inay qaraxyo ka geystaan degmada B/xaawo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaas.
Wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland C/rashiid Xasan C/nuur oo warbaahinta kula hadlay goobta afartaasi nin lagu soo bandhigay ayaa sheegay in nimankaasi lasoo qabtay xilli ay degmada Doolow ku qarinayeen walxaha qarxa.
Nimankaasi ayaa waxaa warbaahinta loo soo bandhigay iyagoo indhaha ka xiran, waxaana lagu soo qabtay caagag waaweyn iyo jawaano ay ka buuxaan baaruuda iyo budada laga sameeyo walxaha qarxa.
“Nimankaan way qirteen inay ka tirsan yihiin Al-shabaab, waxayna ku howlanaayeen falal amniga ka dhan ah, sidoo kale waxay qirteen inay doonayeen inay qaraxyo ka geeystaan B/xaawo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gedo, waxaana lasoo qabtay xilli ay walxaha qarxa ku qarinayeen degmada Doolow” Sidaasi waxaa yiri wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland C/rashiid Xasan C/nuur.
Illaa iyo haatan lama oga sida laga yeeli doonno nimankaasi lasoo qabtay, waxaana la filayaa in dhawaan maxkamad lasoo taago, sida uu sheegay wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland.
Ugu dambeyntii, wasiirka amniga maamulka Jubbaland C/rashiid Xasan C/nuur ayaa u mahad-celiyay ciidamada ammaanka ee iska kaashaday sidii nimankaasi gacanta loogu soo dhigi lahaa.